डिजाइन ब्लग / व्यापार
स्थापना, निर्माण, बढ्दै, र एक व्यवसाय को प्रबन्ध काम कर छ, मुटुको बेहोश को लागी होइन। यदि सबैले यो गर्न सक्दछन्, हैन? यस सेक्सनमा हामी मार्केटिंग, मूल्य निर्धारण, विज्ञापन, स्वास्थ्य, र व्यवस्थापन जस्ता शीर्षकहरू सहित व्यवसायका धेरै पक्षहरूको अन्वेषण गर्छौं। एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी वा संस्थापकको रूपमा, तपाईं बजारको उतार चढाव, र जीवनको बोझ सहन गर्नुहुन्छ र विश्वले तपाईंलाई थप्ने सबै समस्याहरू पार गरेर तपाईं बढ्दै जानुहुन्छ।
भर्खरका व्यवसाय लेखहरू
१२ कारण किन राम्रो डिजाइन राम्रो व्यवसाय हो
विवरण: के तपाईं अझै विचार गर्दै हुनुहुन्छ कि व्यापार डिजाइनमा लगानी गर्ने कि नगर्ने? यो लेख जाँच गर्नुहोस् कि कसरी तपाईंको व्यवसायले राम्रो डिजाइनबाट फाइदा लिन सक्छ र कसरी यसको पूर्ण क्षमता अनलक गर्ने। राम्रो ब्यापारको स ?्केत के हो? उत्तरहरू उद्यमी देखि उद्यमीमा भिन्न हुन्छन्। सत्य त्यो राम्रो व्यवसाय हो ... थप पढ्नुहोस्
व्यापार / डिजाइन / उद्यमी
व्यवसाय कार्ड स्क्यानर: तपाईंलाई वास्तवमै २०१ 2019 मा एक आवश्यक छ? केवल एक तस्वीर तस्वीर
एक पेशेवरको रूपमा, तपाईले धेरै मानिसलाई भेट्नुहुनेछ, र हरेक चोटि कसैलाई भेट्नुभयो भने, तपाईले व्यापार कार्ड आदानप्रदान गर्नुहुनेछ। यसको मतलब, केहि बर्षहरूमा, तपाई सयौं व्यवसाय कार्डहरू मार्फत समाप्त हुनुहुनेछ। अवश्य पनि, सबै कार्डहरू उपयोगी हुँदैनन् र तपाईं तिनीहरूलाई फ्याक गर्न सक्नुहुनेछ। जहाँसम्म, त्यहाँ ... थप पढ्नुहोस्
तपाईंको व्यवसायको लागि फ्लायर मार्केटिंगको शीर्ष १० लाभहरू
तपाईंको व्यवसायका लागि फ्लायर मार्केटिंगका शीर्ष १० लाभहरू के तपाईंले आफ्नो व्यवसायको लागि फ्लायरहरू प्रयोग गर्ने प्रयास गर्नुभयो? यदि होईन भने, तपाईंले गर्नु पर्छ। तपाईंको व्यवसायका लागि फ्लायर मार्केटिंगको शीर्ष benefits फाइदाहरूको बारेमा जान्नको लागि पढ्नुहोस्। SEO किवर्डहरू: जाँच गर्नुहोस्। अनलाइन विज्ञापन: जाँच गर्नुहोस्। अन्तर्क्रियात्मक वेबसाइट: जाँच गर्नुहोस्। तपाइँ मार्केटिंग रणनीतिहरू कभर गर्नुभयो तपाइँलाई मद्दत गर्न ... थप पढ्नुहोस्